An-kitsim-po: isika tompony indray no tsy mahalala | NewsMada
An-kitsim-po: isika tompony indray no tsy mahalala
Sakana iray lehibe ho an’ny fizahantany eto amintsika ny tsy fandriampahalemana any amin’ny faritra maro. Maro ireo vahiny, noho izany, miverin-dalana, ny tompon-tany moa ankoatra izay olana eo amin’ny tsy fandriampahalemana izay, antony iray lehibe indrindra ny fahefa-mividy. Mamaplahelo fa isika Malagasy indray no tsy mahafantatra ny tanindrazantsika sy ireo harena sarobidy samihafa ato aminy.
Tovolahy iray ao amin’ny kaominina Bemanonga, distrikan’i Morondava, nilaza fa tsy mbola nanitsaka izany Antsirabe izany. Samy toerana manana ny lazany anefa ireo eo amin’ny fizahantany. Azo antoka anefa fa tsy io tovolahy io irery no toy izany fa maro ny mitovy aminy. Toy izany koa, tsy vitsy amin’ny mponina aty afovoan-tany tsy mbola nahita izany ranomasina izany nefa ny tanindrazantsika, Nosy.
Faritra maro manerana ny Nosy, efa nahavitan’ireo mpikaroka fanadihadiana samihafa eo amin’ny tontolon’ny fizahantany : ny fomba amam-panao isam-paritra, ny harena anaty ranomasina sy ranomamy, ireo biby sy zava-maniry tsy misy afa-tsy eto an-toerana, sns. Any amin’ny fahitalavitra ny ahitana azy ireny. Ny faritra sasany aza tsy mbola mahita izany fanadihadiana amin’ny sary izany.
Ambanivohitra maro, tany amin’ny 30 na 20 taona lasa, tsy misy fiovana hatramin’izao : tsy ahitana jiro, sekoly, hopitaly…ny lalana moa mbola nofinofy ho an’ny maro.